Archive du 20190513
Tolon’ny kianjan’ny13 mey Nahasoa ny Malagasy marina ve ?
Mitsingerina indray ity ny 13 mey. Nitsahatra talohan'izany i Manandafy Rakotonirina na "i Tranainy", hoy ireo mpitolona tamin'ny 1972.
Governoran’ny faritra Mampandroso sy mampiombona tokoa ve ?
Adihevitra mipetraka eo amin’ny tontolo politika amin’izao fotoana izao ny fikasana handrava ny Antenimierandoholona sy ny fanovana ireo lehiben’ny faritra ho governora.
Todisoa Andriamampandry Vahoaka an’aliny maro no ao an-damosiny
Nofaranana omaly alahady 12 mey ilay « Tournoi Amboma Misoma » Inter-fokontany izay karakarain'ny Kandida depioten’ny TIM-K25 N°1 Todisoa Andriamampandry.
Fitrandrahana an-tsokosoko Vatosoa 10 taonina indray saron`ny zandary
Saron`ny zandary tany Madiokely, kaominina Dabolava, distrika Miandrivazo, faritra Menabe, ny herinandro teo, ny fiara lehibe nitatitra vatosoa milanja 10 taonina avy any Ankiranomena.
Distrikan’i Betroka Nosamborin’ny zandary ny delegem-panjakana
Fantatra, araka ny vaovao voaray avy any an-toerana fa nosamborin’ny zandarimariam-pirenena any Betroka afak’omaly sabotsy 11 mey 2019 ny delegem-panjakana any an-toerana noho ny fanaovana hosoka taratasin’omby “FIB”.
Ambohibe Didy Ambatondrazaka Vitan’olon-tokana « Borne » ny tanàna manontolo
Mitaraina amin’ny tompon’andraikitra mahefa ary nandefa solontena 5 niakatra eto Antananarivo nitatitra ny zava-misy any amin’ny tanànan’izy ireo ny vahoakan’Ambohibe ao amin’ny kaominin’i Didy distrikan’Ambatondrazaka.
EKAR Masindahy Josefa Mahamasina Namarana ny fankalazana ny jobily faha-150 taonany
Nifarana ny sabotsy teo rehefa naharitra roa taona latsaka ny fankalazana ny jobily faha-150 taonan’ny Ekar Masindahy Josefa Mahamasina rehefa nanomboka ny 14 martsa taona 2017.
Thb Champions League Nandresy fanindroany ny 3Fb Toliara
Taorian’ny nandreseny ny CNaPS Sport Itasy tany Andaboly Toliara tamin’ny andro faha-3 eo amin’ny dingana faha-2 amin’ny « Thb Champions League Malagasy 2019 »
Kitra vehivavy nasionaly teny Carion Mbola mitarika vonjimaika ny Ac Sab Nam
Nahazoam-bokatra indray ny fifaninanana baolina kitra vehivavy Malagasy fiadiana ny ho tompondaka nasionaly 2018 « DEFF 3 2018 » andro faha-4 notontosaina teny amin’ny kianjan’ i Carion tamin’ny alahady 12 mey 2019.
Barea-Fahasalaman’i Ibrahim Amada Tsy misy atahorana fa mila tandremana
Tsy misy atahorana fa mila tandremana na izany aza ny fahasalaman’ilay irakiraka afovoany sady vodilaharan’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra,
Olan’ny fanabeazana eto Madagasikara « Ratsy toetra ny androatokon’ireo milaza azy ho profesora’’
Raha tena miaina ny maha manampahaizana azy ary tia mizara amin’ny lafiny rehetra izay milaza ny tenany ho mahay dia tsy izao ny tontolo misy ny fampianarana ambony, hoy ny mpanabe sady mpikaroka eny amin’ny anjerimanontolo, ny Dr Tsiky Rakotomavo.
Samy gaga ny rehetra raha nahita ny fiovana mian-dalana nitranga tamin’ny foiben-toeran’ny antoko HVM eny Antanimena.
Sehatra fambolena manerantany Niakatra 12% ny fifanakalozana ara-barotra
Ny sehatra fambolena dia sehatra tsy dia ahitana fifanakalozana firy eo amin’ny samy firenena matanjaka. Maro ny antony mahatonga izany tahaka ny halafon’ny saram-pitaterana,
KAOMININA AMPITATAFIKA Lalankely 4, 5 km no hasiam-panamboarana
Anisan’ny kaominina mahazo tombony hatrany amin’ireo karazana tetikasa vatsian’ny mpamatsy vola, vola eto amintsika amin’ny ankapobeny ny kaominina Ampitatafika, distrikan’Antananarivo Atsimondrano.
Fanitsiana ny tetibolam-panjakana 2019 Ho mangarahara tokoa ve ?
Hivoaka tsy ho ela amin`ny alalan`ny didy hitsivolana raisina amin`ny alalan`ny filankevitry ny minisitra ny fanitsiana ny volavolan-dalàna hifehy ny tetibolam-panjakana 2019 (LFR 2019) raha ny tatitry ny avy amin`ny fiadidian`ny Repoblika.
Seraseran’ny fahasalamana Nampisahotaka an’Antananarivo ireo afisy efa lany daty
Mila fitomboka, indrindra mivoitra ireo afisy ofisialy, indrindra mahakasika ny aina sy ny fahasalamana.
Ankadilalana Mahamasina Atao fitaovana politika ny trano hazon’ny fokontany
Ataon’ireo mpirotsaka hofidiana fitaovana fakana vato hatrizay ny trano hazon’ny biraom-pokontany Ankadilalana Mahamasina (sary), araka ny voalazan’ireo mponina eny an-toerana. Nanamafy izany